Andro: 17 mey 2020
Isan'ny tranga Coronavirus dia maharesy an'i Italia sy Espaina any Brezila
Nihoatra lavitra an'i Espaina sy Italia ny isan'ny trangana tsimokaretina corona any Brezila, ka mahatonga azy ho firenena fahefatra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny tranga avo indrindra. Any amin'ny firenena izay nahatratra 233 142 ny isan'ny tranga voamarina [More ...]
1915 Tapaka vy vy 318 metatra Bridgeanakkale no vita
Ny farany farany amin'ireo tilikambo mena sy fotsy tamin'ny 1915 Çanakkale Bridge, izay eo am-panamboarana, misy sakana 32, dia nosoloana lanonana natolotry ny filoha Recep Tayyip Erdoğan tamin'ny fihaonambe video. Niresaka tamin'ny lanonana Karaismailoğlu amin'ny foto-drafitrasan'ny fitaterana any Tiorkia [More ...]
Malalaka ny fitateram-bahoaka manomboka ny 19 mey any Antalya
Tamin'ny faha-19 ny volana Mey ny fahatsiarovana ny Atatürk, Tanora sy Fanatanjahantena, izay faha-1919 taona nahaterahan'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk nandoro ny fanilo famonjena tao Samsun tamin'ny fanerena an'i Samsun tamin'ny 101 Mey 19, nivondrona tao amin'ny distrika 5 afovoany ao Antalya [More ...]
Miampita mankany amin'ny lalana Samsun ho an'ny fiarovana ny mpianatra
Ny kaominina ambanivohitra Ankara Metropolitan dia nanafaingana ny fanamboarana ny hivezivezen'ny mpandeha an-tongotra tamin'ny teboka izay sarotra ny fifamoivoizana an-tongotra ary atahorana ny fiarovana ny olom-pirenena. Metropolitan, izay tsy mandà ny fitakian'ny mpianatra, indrindra any amin'ny faritra izay manetriketrika ny oniversite [More ...]
7/24 Mitohy any Bursa ny famaritana asphalt
Ny munisipalin'ny Metropolitan, izay nandray andraikitra tao anatin'ny faritry ny curfews napetraka teo ambanin'ny fepetra coronavirus ary nitondra aspirala 70 19 taonina ho an'ny tany ary efa zatra mandraka ankehitriny, tafavoaka velona tamin'ny XNUMX May Atatürk. [More ...]
Ny lalana mampitohy an'i Istanbul sy Kocaeli dia akaiky ny farany
Ny Kocaeli Metropolitan Munisipaly dia manohy mametraka tetikasa goavambe mba hanomezana fitaterana kalitao sy tony amin'ny faritra maro ao an-tanàna. Ny lalana vaovao namboarina dia manafaingana ny fivezivezena, ary ho lalana fitaterana hafa, [More ...]
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanohy nandinika ny serivisy tao amin'ny andrim-panjakana nandritra ny làlam-pandehanana tany an-tranon'ny tanàna iray manontolo. İmamoğlu, izay nanao fanadinana tao amin'ilay trano niasa tao Eyüpsultan hitondra ilay "fotaka" amin'ny feta Golden Horn dia nilaza hoe: "Ity dingana ity dia [More ...]
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer dia nandinika ilay tetik'asa 'Lalana voajanahary' tany an-toerana, mandrakotra ny faritra atsimon'ny Gediz Delta. Ny Filoha Soyer dia mampiantrano vorona an-jatony, indrindra ny flamingô, ary karazana an'arivony. [More ...]
Ny tetik'asa "fiara an-trano", izay nentina tamin'ny fandaharam-potoana nataon'ny dokambarotra Erdoğan dia ao anatin'ny fandaharam-potoana taorian'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny andron'ny valanaretina. Tamin'ity indray mitoraka ity, nilaza ny tetikasa fa ny tany, izay voalaza fa haorina, dia nafindra tany amin'ny tahirim-bolan'ny harena. [More ...]
Ejder Yalçın 4 × 4 Fiadiana mitam-piadiana fiarovan-tena avy amin'i Nurol Makina no ilain'ny andian-tafika miaramila sy ny mpitandro ny filaminana amin'ny sehatra rehetra sy ny toeran'ny tany, ao anatin'izany ny trano fonenana sy ambanivohitra. [More ...]
Nahazo ny hafainganana ny fifamoivoizana ara-barotra virtoaly
Ny fitsidihana ny delegasionan'ny varotra nokarakarain'ny minisiteran'ny varotra sy ireo mpanondrana eran'izao tontolo izao dia mitohy hatrany amin'ny tontolo virtoaly nefa tsy miadana ao ambanin'ny trangan'aretina vaovao coronavirus (Kovid-19). Ny fitsangatsanganana araka ny fepetra Kovid-19 [More ...]
Fivoriana fanombanana ny tetikasa Çeşme
Ny minisitry ny kolontsaina sy ny fizahantany, Mehmet Nuri Ersoy dia nilaza fa ny tanjon'izy ireo dia ny hahatonga ny distrika ho marika fakan-tahaka amin'ny fizahan-tany miaraka amin'ny Çeşme Project. Ny minisitra Mehmet Nuri Ersoy, ao anatin'ny planin'ny fizahantany Aegean, [More ...]
Ny minisitry ny kolontsaina sy ny fizahantany Mehmet Nuri Ersoy, "raha tsy misy diso dia manantena ny fiatrehana fizahantany amin'ny hetsika ara-pizahantany toy ny 28 Mey." hoy izy. Minisitra Ersoy, karazana vaovao vaovao amin'ny NTV mivantana tamin'ny distrikan'i Bodrum any Muğla [More ...]
Lisitry ny boky ho an'ny ankizy mandritra ny 0-6 taona
Raha ny ministeran'ny fianakaviana, asa ary asa fanompoana ara-tsosialy, boky 0 mampihetsi-po ho an'ny ankizy izay nomena isa ho an'ny ankizy 6-427 taona dia nivoaka tao amin'ny tranokalan'ny minisitera. 0-6 taona sisa tavela amin'ny andrim-panjakana mifandraika amin'ny ministerantsika [More ...]
Raha ny bokin'i Barry S. Turner sy Michael Radford, izay hita ho loharanom-pahalalana azo antoka ho an'ny tantaran'ny fitaterana an-tsambo any Sipra, izay namela ny marika tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahan-tany anglisy, dia nampiasaina koa, ary fampahalalana avy amin'ny zokiolona miaina tamin'izany andro izany. [More ...]
Iza moa i Ekrem İmamoğlu?
Ekrem İmamoğlu dia teraka tamin'ny taona 1970 tao Trabzon. Rehefa nahazo diplaoma tamin'ny Sekoly ambony Trabzon dia nahazo diplaoma tamin'ny departemantan'ny fitantanan-draharaha tao amin'ny Oniversite Istanbul izy, ary nahazo ny mari-pahaizana an'ny Master and Human Management and Management tao Istanbul University. Ny fananganana tamin'ny 1992 [More ...]
Nanambara ny TCDD Tasimacilik fa hanomboka ny sidina High Speed ​​Train (YHT), izay naato noho ny valanaretina coronavirus, aorian'ny fety (tsy mihoatra ny 1 jona). Araka ny vaovao nataon'i Olcay Aydilek avy ao Habertürk, tamin'ny fivoahan'ny coronavirus tamin'ny martsa. [More ...]
Repoblika Tiorka ny Repoblika ofisialy an'ny Talen'ny Fitantanan-dàlana ho an'ny mpitantana sy ny mpikambana ao amin'ny Birao izay nitodika tany Kara sy nankasitraka ny lalàna No. 233, Andininy faha-8 amin'ny tsy fahombiazan'ny tanin'ny filoham-pirenena faha-3 miaraka amin'ny 2 [More ...]
Hisy toham-by nostalgia miasa ao İzmir sy Istanbul Taksim. Ny Tetikasa Nostalgic Tram Mostopolitan dia velona. Aiza ny Nostalgic Tram hatsangana? Aiza no handalovana? Tram Nostalgic, izay famantarana ny Taksim Istiklal Avenue any Istanbul, ao Izmir [More ...]
Izy io no zaribe indrindra ampiasaina amin'ny lalamby Adana Mersin State Manodidina ny 45 minitra ny ora fitsangatsanganana. Adana Mersin lamasinina lamasinina manomboka amin'ny 6:00 maraina, na inona na inona fahavaratra sy ririnina vanim-potoana 23:15 [More ...]
Iza moa i Recep Tayyip Erdoğan?
Recep Tayyip Erdoğan, izay teraka avy tany Rize dia teraka ny 26 Febroary 1954 tao Istanbul. Nahazo diplaoma tamin'ny Sekolin'ny Kilonga Kasımpaşa Piyale tamin'ny taona 1965 ary avy ao amin'ny Sekolin'i Imam Hatip Istanbul tamin'ny 1973. Amin'ny fanomezana ny fanadinana ireo làlam-pitoviana, Eyüp [More ...]
Lalamby any Panama
Rehefa vita ny lalamby tany Panama tamin'ny taona 1855, sambany nampitambatra ny ranomasina Atlantika sy Pasifika sambany. Fiaran-dalambe 80 km, mpandeha mandeha amoron-dranomasina any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefan'i Etazonia [More ...]
Androany teo amin'ny tantara: an-tapitrisany lalamby 17 1972 991 XNUMX
Androany ao amin'ny tantara 17 1972 991 Railway dia manana fahavoazana an-tsoratra amin'ny XNUMX tapitrisa TL.